Iwo akanakisa kugovera kweLinux 2014 zvinoenderana nezvaunoda | Linux Vakapindwa muropa
Ichi chinyorwa chakaitirwa avo vakatanga munyika ino, kune vashandisi veamwe masystem anoshanda vari kuyedza kuongorora iyo Linux nyika kana yeavo vaneta nemamwe mapuratifomu uye vanoda kumhara pane ino. Tichaedza kuita ongororo yezvakanakisa Kugoverwa kweGNU / Linux yegore rino 2014.
Nokuda kwe mhando yevashandisi kunaani zvakaitirwa, zvakare ruzivo rwehunyanzvi haruzopindirwa uye zvese zvinoratidzwa mumutauro wakapusa uye pasina hunyanzvi hwakawanda. Zvakareruka sezvinobvira kuitira kuti munhu wese agone kuzvinzwisisa kunyangwe pasina hunyanzvi hwemakomputa.
Tichakubatsirawo iwe sarudza kugovera yakakodzera zvinoenderana nezvido zvako, kunyangwe uri mushandisi wekutanga kana mumwe munhu anoda kuseta sevha kukambani yako. Kune izvi isu tichagadzira rondedzero yeminda, kana zvido zvekutanga, uye mukati medu ticharondedzera kugovera kwakakodzera kwazvo mune imwe neimwe nyaya.
* chitsamba: Kana iwe uchida rubatsiro kune imwe nyaya isina kuiswa mune ino chinyorwa, usazeze kusiya komendi.
2 Chii chinonzi kugovera?
3 Ndiani anoshandisa GNU / Linux?
4 Kubatsira kweGNU / Linux
5 Sarudza yako Linux zvinoenderana nezvaunoda
Linus Torvalds, iye musiki.
Linux haisi yekushandisa system, chikaraIzvo zvakatotaurwa kane chiuru, asi izwi Linux richiri kushandiswa kureva rakazara rinoshanda system. Iwe unofanirwa kuziva kuti izvi hazvina kururama uye chinhu chakakodzera kuita kushandisa Linux kureva chete uye chete kune kernel kana kernel yeiyo inoshanda sisitimu, ndiko kuti, chikamu chakakosha kwazvo.
FreeBSD, Windows kana Mac OS X ehe iwo akazara mashandiro ekushandira uye anoenda kupfuura kernel yakapusa, iri kugoverwa munzira izere nezvimwe zvinhu zvinodiwa kuti uzadzise. Apa ndipo panouya zvirongwa zvakanyorwa pasi peiyo chirongwa cheGNU zvinouya mumufananidzo, izvo zvinouya kuzopedzisa hurongwa. Ndokusaka GNU / Linux iri pachokwadi kana tichida kunongedzera kwariri seyese yakakwana sisitimu yekushandisa, kana kutaura zvakananga zita rekugovera ratiri kutarisa.
Chii chinonzi kugovera?
Sezvo isiri yakakwana sisitimu yekushandisa, asi chakakosha chidimbu chepuzzle, tinogona kupedzisa sisitimu nekuwedzera zvimwe zvinhu uye izvi zvinogona kuve zvakasiyana kwazvo. Ndokusaka Linux ichionekwa pasi pekugoverwa kwakawanda, ese akasiyana uye aine akasiyana maitiro. Uye iro basa reiyo GNU projekiti inozadza iyo kernel kuve neinoshamisa yekushandisa system.
Izvi hazviitike ne operating systems seWindows 8 kana Mac OS X 10 iyo inoburitswa zvakangogadzirwa nemusiki, mune ino Microsoft neApple zvakateerana. Vanosarudza kwauri zvikamu zvavanowedzera uye nemabatiro avanozviita, vachitorera kwauri rusununguko rwekusarudza pane zvaunofarira uye zvinoenderana nezvaunoda. Ko kana ndisingade chero kugoverwa? Izvo zvinorema nemari hombe iriko, yega yega ine huzivi uye yakanangana nechimwe chikamu, asi kana zvikaitika unogona kugadzira yako pasina dambudziko ...
*chitsamba: Munyika yeGNU / Linux isu tinowanzo tarisa kune kugoverwa neshoko rekuti "distro" sechidimbu.
openSuSE, semuenzaniso, iri distro yakagadzirirwa kushandiswa kwemazuva ese epamba senge Windows kana Mac OS X, zvisinei, Android inogona kuoneka seLinux "kugovera" yakanangana nema mobile phones. Ini ndinogara ndichiisa muenzaniso kubva kune nyika yemotokari kuti uinzwisise zvirinani uye ndiko kana iwe uchifungidzira kuti Mercedes haina kugadzira mota, injini chete. Ipapo iwe unogona kutenga injini uye wedzera chassis yaunoda, kumiswa kwaunoda, iyo yakanakisa nzira, giya bhokisi, yemukati, ...
Zvakanaka, ndizvo zvazviri mune iyo distros. Semuyenzaniso, Windows 8 Iyo Windows NT 6.2 kernel inoshandisa iyo Metro graphical interface (Yemazuva ano UI), iyo CMD Shell, iyo Win32 uye Win64 API, yayo bhuti maneja, Windows Gadziridza system, Windows Installer inosimudza, DirectX graphical API, DLL maraibhurari, nezvimwe. Muchiitiko cheMac OS X 10.8 inogara ichishandisa XNU kernel, iyo Aqua interface, Shell Bash, Carbon API, yayo bhutsu maneja, Mac Installer installer, PUB maraibhurari, nezvimwe. Uye hapachina imwe, iwe hauna imwe sarudzo kunze kwekutsungirira zvidimbu izvi kana uchida kushandisa masisitimu aya ...
Mukugovera Linux pane mamirioni yemamiriro edesktop ekusarudza kubva, senge KDE, GNOME, Xfce, Mate, Kubatana, Cinnamon uye yakareba etc. NezveShell, unogona kusarudza pakati peBash, Tcsh, Zsh,… Ipo ivo vatakuri veLinux vari: LILO, GRUP, SysLinux nevamwe. Iwo ma installers kana mapakeji maneja akaenzana zvakaenzana: YAST, Synaptic, Muon, YUM, nezvimwe, pamwe nezvimwe zvinoshandiswa mupurojekiti yeGNU.
Ndiani anoshandisa GNU / Linux?
Jaime Hyneman, mubati wehurongwa hwesainzi "Hunters of Myths" uye anozvibvuma mushandisi weLinux.
Ndiimwe yemibvunzo "inotyisa" maererano GNU / Linux nyika, sezvo vashoma vanoziva kuti sisitimu iyi inoshandiswa kusvika papi. Uye izvi zvinokonzerwa nekugamuchira kwayo kwakaderera munyika yepamba, uko vazhinji vashandisi vanozviona sevatorwa.
Asi munyika nyanzvi uye bhizinesi Linux yakajairika zvakanyanya kupfuura vanhu vazhinji vanofunga, kunyange inozivikanwa. Muchikamu che server, Linux ine mugove wakakura uchienzaniswa nemakwikwi ayo akananga, FreeBSD, Windows Server uye OS X Server. Izvozvowo zvinoitika muchikamu chekomputa, ichiiswa mune anopfuura makumi mapfumbamwe nemana muzana emakomputa ane simba kwazvo pasirese.
Masangano akakosha seayo NASA kana CERN Vanoishandisa kwemakore, kana makambani akaita se AMD, Intel, IBM, Sony, Google, Cisco, Novell, HP, nezvimwe, Linux yakaiswa kunyangwe pamaseva evavengi vavo, ndinoreva Microsoft neApple, izvo ona sezvo avo masisitimu ivo pachavo vasingakwanise kukwikwidza neyemahara kernel.
Zvemakambani makambani seToyota, Ferrari, Mercedes, Ford, Peugeot, kana maaerospace makambani seVirgin America, Boeing neAirbus vanewo sehurongwa. Mune fashoni iripowo mumhando dzakadai saTommy Hilfiger, kuwedzera kune mamwe masangano uye hurumende. Vazhinji vevanonyanya kubiridzira vanoishandisa, senge anozivikanwa Kevin Mitnick. Unogona kuona rondedzero izere pano.
Kubatsira kweGNU / Linux
Zvakanakira kushandisa GNU / Linux uchienzaniswa neWindows kana Mac OS X ivo vatove vakaomeswa zvakanyanya pawebhu. Dzakadzokororwa kakawanda, asi ini ndichaedza kugadzira remix yezvakanaka zvakakosha zvinogona kuwanikwa. Kuti uwane rumwe ruzivo iwe unogona kuona zvimwe zvinyorwa zvatakaita tichienzanisa Linux vs Windows, Linux vs Mac OS X kana kunyange Linux ichipesana nevamwe vemahara vehukama vakaita seBSD kana FreeBSD.
Imwe yei chikuru zvakanakira zviri pasina mubvunzo kuti ndeye mahara uye yakavhurwa sosi software. Aya mazwi dzimwe nguva anovhiringidzwa neyemahara uye izvi hazviwanzo kuitika. Kunyangwe Linux iriwo yemahara, pane yemahara uye yakavhurwa sosi software iyo inobhadharwa uye yepropetiary software iyo yemahara.
Asi kazhinji, ichokwadi kuti fungidziro yekuti kana iri mahara mahara. Kunyangwe avo vakanyanya kuchenjera pachinhu ichi vasingadi kuti iye avhiringidzike, zvekuti vatauri veChirungu vakachinja izwi rekuti "mahara", iro rakajeka zvikuru nekuti rinogona kumiririra zvese zviri zviviri zvemahara uye zvemahara, zvechiCastilian "zvemahara". Ndokusaka munzvimbo zhinji dzeChirungu tichigona kuona "mahara software" sechipikisheni kuratidza zvirongwa izvi.
Software muridzi uye akavhara haitenderi kodhi yayo yekodhi kuti ione, ndiko kuti, mitsara iyo programmers vakanyora mune imwe programming mutauro kuti vagadzire iyo. Uye haitenderi kuchichinjisa nekusagovera kwainobva, ndoda kuigovera zvakasununguka, sezvo ichinzi imhosva (piracy).
Iyo software ye open sosi uye yemahara inokutendera kuti utarise kodhi yako kuti uone zvayinoita chaizvo, kuishandisa nekuda kwekudzidzisa, kuigadzirisa kana kugadzirisa zvikanganiso, uye kuigovera zvakasununguka pasina kutyora mutemo. Izvi zvinobvumidza kuwedzeredzwa kwakawanda uye zvinowedzerwa nekukurumidza zvakanyanya kupfuura zvakavanzika software.
*chitsamba: pese panowanikwa "* nix" ini ndoda kutaura kune ese akanyoreswa Unix uye Unix-senge anoshanda masystem, pasina kupinda mune zvinoenderana nyaya, marejista uye POSIX standard.
Zvimwe zvipikisheni izvo zvinogona kusungirirwa paLinux zvakagara nhaka kubva kuzvisungo zveropa izvo zvinomubatanidza kuUnix, ese * nix masystem (Solaris, FreeBSD, Mac OS X, OpenVMS, Unix, HP UX, AIX, IRIX, Hurd, ...) vane zvimwe mikana yakanaka kwazvo uye ndeiyi:
Performance: * nix inowanzoita zvinoshamisa, uye Linux haisi iyo. Iyo kumhanya kwayo kwakakwirira zvakanyanya kupfuura kukwikwidza masystem uye zvirokwazvo akakwirira zvakanyanya kana ichienzaniswa neWindows. Vashandisi veLinux dzimwe nguva vanozvirumbidza kuti kunyangwe vachimhanya echinyakare Windows zvirongwa kubva kuLinux kuburikidza neyakaenzana dhata, vanoshanda nekukurumidza kupfuura pane Microsoft's system.
Inishuwarenzi: dzakachengeteka zvakanyanya kupfuura masisitimu akaita seWindows, uye kunyangwe mukati me * nix, Linux yakachengeteka kupfuura mamwe masisitimu akaita seMac OS X kana FreeBSD. Kana paine kushomeka, nekuda kwenzvimbo huru yekusimudzira, ivo vanogadziriswa nekukurumidza uye nekudaro vanoita kuti zvive zvakaoma kushandisa. Vanoti izvo zvakasarudzika zvinosimbisa mutemo uye ndezvekuti pakave nezvinetso zvekuchengetedza, zvakaita seinonzi inonzi Heartbleed iyo yakanganisa OpenSSL system neLinux maseva uye isingawanzoitika zvekuti yanga iri nhau yakapararira pamambure (uye kuti haina kana kukanganisa Linux sekudaro, asi OpenSSL software). Kana iwe usiri kuda kuisa antivirus paLinux, hapana chinoitika uye kana chimwe chinhu chikaitika rimwe zuva mhedzisiro yacho ishoma kwazvo zvekuti haina kana kukodzera kuiisa. Unogona here kutaura zvakafanana kune Windows?
Yakasimba: yayo inoshamisa mvumo system inobvumidza kuwedzera kusimba kuenzaniswa nemamwe masisitimu akadai seWindows. Mu * nix haugone kuisa / kudzima mapurogiramu kana mafaera ehurongwa pasina superuser (mudzi) mvumo. MuWindows, semuenzaniso, tinogona kudzima .dat mafaera kubva kuhurongwa kana maFaira Mafaira eProgramu, ayo anogona kukonzera chirongwa kana iyo system yacho yega kumira kushanda.
Muchitevere: bhuruu screens ayo Windows atakamboshandisa haana kunyanyoitika mu * nix. Iyo inozivikanwa "Blue Screen of Death" kana BSOD (Blue Screen of Death) nekuda kwekukanganisa kwemaitiro zvakajairika kwatiri kuti tione pane * nix system, uyezve, kunyangwe dai taida kuikonzera neku "bata zvisizvo" system, iyo zvingave zvakaoma kuzviita. Nenzira, iyo yakaenzana neWindows BSDO inozivikanwa se "Kernel Panic" (pane yekare Mac kana Apple iPods inozivikanwa seSad Mac). Neichi chikonzero chiri nani kwazvo kune basa rehunyanzvi, kuverengera kumwe kugadzikana kunokutendera iwe kugadzirwa zvirinani uye kudzivirira matambudziko.
tefa: sekutaura kwangu Linux inoshanduka zvakanyanya, inochinjika zvakanyanya kupfuura imwe * nix. Muenzaniso ndewekuti kune emagetsi zvigadzirwa nemidziyo yemumba inoshandisa zvikamu zveLinux kodhi. Toaster inogona kushandisa chikamu cheLinux kodhi, iyo Smartphone inogona kuishandisa (ona Android, Tizen, Firefox OS, Megoo,…), mota dzirikushandisa, kunge sevha kana komputa huru. Handifunge kuti iwe unogona kuita zvakafanana nemamwe masisitimu. Edza kuisa Mac OS X kana Windows pakomputa huru uye pane PDA ...
Zvinotakurika: Sezvo ichinyanyo kurongedzwa muC mutauro (kunyangwe iinewo zvikamu zvecustom code), inongova kernel inotakurika. Muchokwadi, Linux yatyora rekodhi yeiyo inotakurika sisitimu, ichivepo kune dzakawanda zvezvivakwa. Windows, semuenzaniso, inowanikwa yeARM, x86 (IA-32), x86-64 (AMD64), uye yeIA-64 (Itanium). Mac OS X yaive yePowerPC mushanduro dzayo kubva pa10.0 kusvika 10.5.8 uye kubva ipapo yakaendeswa kune x86 uye x86-64. Kunoseka kana uchienzaniswa neLinux akatsigira mapuratifomu: x86, x86-64, Alpha, ARC, ARM, AVR32, Blackfin, C6x, ETRAX CRIS, FR-V, H8 / 300, Hexagon, IA-64, M32R, m68k, META, Microblaze , MIPS, MN103, OpenRISC, PA-RISC, PowerPC, s390, S + core, SuperH, SPARC, TILE64, Unicore32, Xtensa, nezvimwe. Izvi zvinoratidza huwandu hwemachina umo Linux inogona kuiswa pasina dambudziko, kunyangwe maraibhurari akaiswa port kuti aurayiwe mu8-bit ATMega microcontroller yakafanana neiya inowanikwa mumabhodhi eArduino. Zvirokwazvo mugadziri weichi chigadzirwa, Dmitry, aigona kudikitira ropa kusvikira azorega asati aita zvakafanana neWindows kana Mac OS X. Iyo sisitimu yakatora maawa mana kuti ibhuye pane isina simba 4-bit chip, asi pakupedzisira yakatanga kunyange mumifananidzo yemifananidzo .
enderana: ndicho chimwe chezviso zvakaipisisa zveLinux, asi hachisi dhonza zvachose. Makambani mazhinji uye mazhinji ari kuburitsa madhiraivha eLinux. Vagadziri vanofarira Linux vakura zvakanyanya uye iyo vhidhiyo yemitambo indasitiri yakashandura chikuva ichi kubvira gore rapfuura, ichiwedzera zuva nezuva nhamba yemazita anowanikwa kune ino sisitimu. Pasina kana gore, vhidhiyo yemutambo zvemukati paValve's Steam chitoro yakura ne 900%. Aya manhamba anoshamisa uye tariro yakajeka yekufunga kuti Linux haisi sarudzo yakaipa yeramangwana. Uye zvinhu zvikuru zvichiri kuuya ... Uye kana usiri kufara mupfungwa iyi, unogona kugara uchienda kuhunyanzvi kana emulators senge Waini, Tamba PaLinux, nezvimwe.
Sarudza yako Linux zvinoenderana nezvaunoda
ari Zvakanakisa kugoverwa kweLinux 2014 zvinoenderana nezvaunoda ndizvo zvinotevera:
* Cherekedza: zviri pachena kuti ini handidi kusarudzira vakasara kana kuvashora, munhu wese akasununguka kufunga izvo zviri nani kana zvakaipa. Mune yangu chaiyo kesi ini ndoda openSuSE nekuti ndiyo yekutanga distro yandakatanga nayo muLinux nyika. Nguva pfupi yadarika ini ndakaedzawo Ubuntu uye ndakaifarira zvakanyanya, asi pasi pasi ndine rudo chairwo rweSUSE. Izvi hazvireve kuti hazvisi nani kana zvakanyanya, ingori nyaya yekuravira.
Kune vashandisi vatsva kuLinux world uye generic use: sarudzo dzakanakisa dzevashandisi vatsva ndeLinux Mint, Ubuntu, Linux Deepen, uye openSUSE distros, nenzira iyoyo. Kunyangwe kubva pane zvakaitika kwandiri uye neboka rakakura rekuvandudza kuseri kweCanonical acronym, ini ndinogona kukurudzira Ubuntu pasina kurerutsa zvakasara, nekuti ese akachengeteka, akasimba uye akapusa. Ubuntu iri nyore uye ine yakajeka kwazvo graphical interface. Kubatana kwaro desktop kunoyeuchidza Mac OS X mune dzimwe nzira, saka kana iwe uchibva kuMac world ichave inonzwisisika uye inokwezva. Iyo Ubuntu Software Center inokutendera iwe kuti uise neinyore mbeva yekudzvanya, pasina zvimwe zvinetswa uye ine rakanyanya kuwanda runyorwa rwemaapp.
Dzazvino kugadzikana kusunungurwa: Ubuntu 14.04
Dhizaini uye multimedia kugadzirisa: Kana iwe uri mugadziri kana dhizaini chinhu chako, ndinokuraira ArtistX uye Ubuntu Studio. Yechipiri ingangoita hwaro hweBuntu distro pane izvo zvakakosha maturusi uye mashandiro akawedzerwa ekugadzira uye kutsikisa nyanzvi. ArtistX inokurudzirwa kwazvo, mashandiro ayo akangofanana neUbuntu Studio. ArtistX inobvumidza kugadzirwa kwemifananidzo, vhidhiyo uye odhiyo, zvakare inosanganisira kuwanda kwematurusi ekugadzira 2D uye 3D mifananidzo, kudhirowa, kutora mifananidzo zvakare uye kugadzirisa kurira.
Yazvino vhezheni yakagadzikana: ArtistX 1.5
Kuwanika: Kune avo vane rumwe rudzi rwekunetseka, sekuderedzwa kugona kuona, kupofomara, dyslexia, kudzikisira kufamba kwemotokari, nezvimwe, kugovera kwavanotsvaga ndiko inzwi linux. Kugoverwa uku kunobatanidza maturusi ekuverenga zvinyorwa pachiratidziro, kuwedzera nzvimbo dzechidzitiro kuti uone zviri nani, mafonti akasarudzika edyslexics, pane-skrini keyboard kune vanhu vane matambudziko ekufamba, nezvimwe.
Dzazvino kugadzikana kusunungurwa: Sonar Linux 2014.1
Shanduko yesainzi: kune akawanda akagoverwa masayendisiti. CERN yakagadzira distro iyo yaive bhenari clone yeRed Hat Enterprise Linux uye yakanyorwa kubva kune ino kodhi kodhi kuti ishandiswe muCERN neFermilab labs. Kugoverwa uku kwainzi High Energy Physics Linux, kunyangwe yakazobhabhatidzwa se Sayenzi Linux. Kugoverwa uku kungave kwakanakisa mundima iyi, kunyangwe paine vamwe vakaita saPoseidon, anonyanya kushandiswa mune zvedzidzo uye zvedzidzo minda. Poseidon inochengetwa nevasayendisiti uye neyeGerman Institute MARUM, ine maturusi epurogiramu, masainzi emazwi processor, kuverenga, 2D / 3D / 4D kuona, manhamba, mepu, bioinformatics, zvishandiso zveGIS, nezvimwe.
Yekupedzisira kugadzikana kusunungurwa: Sayenzi Linux 6.5
Dzidzo: DouDou Linux Iyo ndeimwe yezvakakosha zvikuru kugoverwa kweLinux kwedzidzo. Iyo yakavakirwa paDebian uye yakagadzikana kwazvo. LinuxKidX yakafanana mune iyi pfungwa naDouDoou, yakanyatsogadzirirwa vana uye kushandiswa kwayo mumakirasi anobatsira mukufunda. Iyo ine iri nyore-kushandisa-yakagadzirirwa tafura-tafura ine huwandu hukuru hwezvirongwa zvekudzidzisa nemitambo yeveadiki. Edubuntu chibviro cheUbuntu chakanyatsogadzirirwa dzidzo yepuraimari nesekondari (makore 6-18), zvese evadzidzi nevadzidzisi. Kana isu tikaenda nhanho imwe kumberi tikanangisa vadzidzi vemberi, kune zvekare kumwe kugovera kunonakidza kunonzi ForeSight.
Dzazvino vhezheni yakagadzikana: DouDou Linux 2.1 Hyperborea
Chengetedzo uye zvakavanzika: Kune zvakawanda zvakagoverwa zvinoita semidziyo ine simba kune avo vakazvipira kuchengetedzeka, senge Kali Linux ine huwandu hwezvishandiso kuita bvunzo dzekuchengetedza uye yekupinda. Kumwe kugovera kwakafanana ndiBugtraq, iine huwandu hwemapakeji ekupinda uye ongororo dzekuchengetedza. Asi pamusoro padzo dzese, TAILS (Iyo Amnesic Incognito Live System) inomira kunze, distro inonyanya kutariswa nezvechengetedzo, kuvanzika uye kusazivikanwa munharaunda. TAILS ingangove nzira yekuchengetedza yakachengeteka kwazvo pasi rese uye ndeimwe yezvishandiso zvinoshandiswa naEdward Snowden. Vagadziri vayo, avo vanoziva zvishoma nezvavo nekuti vanoramba vasingazivikanwe, vari mukutarisira kufukidza chero gomba rekuchengetedza uye kuridzivirira zuva nezuva. Iyo zvakare inovimba neyakakurumbira Tor chishandiso, kuti irege kusiya trace pane network.
Dzazvino vhezheni yakagadzikana: Miswe 1.1
Computer masayendisiti: Insert iko kugovera kunogoverwa seLiveCD uye ine huwandu hwakawanda hwezvishandiso kuita bvunzo dzehardware uye kuona matambudziko, chishandiso chakakosha kana iwe uri nyanzvi yemakomputa. Izvo zvakare zvinokutendera iwe kuti udzore iyo system, kugadzirisa zvikanganiso, ongorora iyo system, maneja network, nezvimwe. Kune rimwe divi Caine iko kugovera kune avo vakazvipira kune forensic data ongororo. Asi kana kuvandudzwa kwesoftware chiri chinhu chako, iwe zvakare uine mugove wakakodzera, unonzi PoweredByLinux Dev Edition x64, nematurusi ekunyora kodhi uye kuronga zvirongwa.
Dzazvino vhezheni yakagadzikana: Isa 1.3.9
Zvemagetsi: CEELD kugovera kwakagadzirwa kubva kuSUSE Studio uye chidimbu chayo chinobva kuCyler's Electronics Injini Linux Distro. Inopa huwandu hwezvishandiso zvemainjiniya emagetsi senge kuenzanisa kwedunhu, CAD, kudhirowa kwehunyanzvi, VHDL, kuverenga kwemagetsi, dhizaini dhizaini, nezvimwe. Kugovaniswa kunotiyeuchidza nezveFEL (Fedora Elektroniki Lab) zvichibva paFedora.
Dzazvino vhezheni yakagadzikana: CEELD Linux 0.1.5
Maseva uye bhizinesi nharaundaKunyangwe paine mamwe akawanda emaseva akadai seDebian, Ubuntu Server, nezvimwe, madzimai maviri ari muchikamu ichi hapana mubvunzo kuti SuSE Linux Enterprise Server (SLES) uye Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Zvese, SLES uye RHELIwo akakwenenzverwa ane simba zvakanyanya neakawanda maturusi ekambani nemaseva. Kugoverwa uku kunomira kuMicrosoft Windows 8 Enterprise uye Apple Mac OS X. Vane nhau dzichangoburwa dzeichi chikamu uye munguva pfupi yapfuura musoro wegore uye kuona, zvichidikanwa uye zvinonakidza mumazuva edu, zviri kutemerwa zvakanyanya.
Yazvino kugadzikana kusunungurwa: SuSE Linux Enterprise Server 11.3
Utano nemishonga: Kunyangwe ichitaridzika kunge isinganzwisisike, kune kwakakosha kugoverwa kweyehutano chikamu. Imwe yacho iLinux yeMakiriniki, kugovera kunosanganisa software yehutano uye yakafanana nezvimwe zvinogoverwa seDebian Med, Fedora Medical, openSuSE Medical, nezvimwe. Linux yeMakiriniki yakavakirwa paDebian / Ubuntu, ichiwedzera iyi software yakagadzirirwa kuongororwa kwehutano. Dambudziko neLinux yeMakiriniki ndeyekuti zvinoita kunge chirongwa chakasiiwa ...
Engineering uye akitekicha: CAELinux iri LiveDVD ine mapakeji ekombuta yakabatsirwa dhizaini kana CAD uye nematurusi CAE, FEA, CFD, nezvimwe.
Dzazvino vhezheni yakagadzikana: CAELinux 2013
Kune zvikwata zvine zviwanikwa zvishoma: Zvese zvekare zvishandiso nemidziyo ine yakaganhurirwa Hardware, pane dzimwe nzira dzaungashandisa kuve neyakareruka system inokwanisa kuita kwayo kuita pasina zvipingaidzo. Iko kugovera par kugona kuri Lubuntu, chaizvo iyo Ubuntu ine LXDE desktop yekushandisa zvishoma zviwanikwa uye kureruka. Lubuntu anogona kushanda nePentium II processor pa400 Mhz uye 192 MB ye RAM. Dzimwe nzira dzinosanganisira Bodhi Linux, Linux Lite, Xubuntu (yakafanana neLubuntu asi inoshandisa Xfce desktop nharaunda), uye Puppy Linux.
Dzazvino kugadzikana kusunungurwa: Lubuntu 14.04
Kune vatambi: Pasina kupokana Valve, anonyatso kuzivikanwa wevhidhiyo musimudziri uye muridzi weSteam chitoro, akagadzira imwe yeakanakisa kugovera kwevateveri vemitambo yemavhidhiyo. Inozivikanwa se Steam OS uye inowedzeredzwa zvakadzama mukubata kwayo ichisimbisa pasirese yemavhidhiyo emavhidhiyo uye multimedia. Iyo yakagadzirirwawo vhidhiyo consoles senge iyo Steam Machine.
Yekupedzisira yakagadzikana vhezheni: SteamOS 1.0
Kuti upedze, wedzera kuti kana iwe uchirodha pasi kugovera iwe unogona kuiwana seSIO yekuipisa iyo yakananga paCD kana DVD, uye izvi zvinobva zvave Live (LiveCD, LiveDVD kana LiveUSB). Iyi ficha haina kujairika pane mamwe masisitimu anoshanda, asi zvakajairika paLinux. Icho chifananidzo iwe chaunogona kupisa kune pendrive, CD kana DVD uye nacho unogona kuzviisa zvese zvakajairwa uye nekumhanya nazvo pasina kufomati nekuisa chero chinhu. Izvi zvinoitwa zvakananga kubva ku RAM, pasina kugadzirisa dhiraidhi rakaomarara, zvichibvumira kuyedza nekukurumidza kwesisitimu pasina kugadzirisa kana kudzima chero chinhu pakombuta yedu.
Iwe unogona zvakare kutarisa kuti pane akasiyana ISO mifananidzo ine akasiyana mazita, semuenzaniso i386, x86-64, nezvimwe. Izvi zvinoreva kuvakwa kwavakagadzirirwa. i386 is a distro for 32-bit processor, nepo x86-64 iri yemakumi masere nemasere masisitimu Iwe unofanirwa kusarudza yakakodzera maererano neCPU yako ...
Kana iwe waifarira chinyorwa ichi iwe unenge uchinyatsoda yedu yakakosha nezve akanakisa Linux mamwe maWindows zvirongwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Kufananidza: yakanakisa GNU Linux kugoverwa kwa2014
Ndicho chikonzero uye nezvimwe NDINODA LINUX
Ndine mavhiki maviri ndichiedza kuisa Debian 7 kubva kuUSB uye handina kukwanisa. Iyo PC inotanga kubva kuUSB asi inogara pane yakasviba skrini kumirira imwe yekuraira (Grup / Boot). Ndiri kubhoira muLinux.
Chandinoda kuisa sevha yekushandisa seFaira / Printer uye AD server neLDAP.
Ndokumbirawo makomendi ako nemazano.
Pindura kuna Jean
kevin madzimambo akadaro
shandisa universal usb installer, uye kana zvisiri izvo, urikuiisa isina graphical nharaunda, kana ini ndakunzwisisa iwe nenzira kwayo zvinoita sekunge chete igobvu rinowoneka, kune akati wandei nharaunda, kde, gnome, mate nezvimwe, ini ndinokurudzira gnome, Ini handirangarire mirairo yekuvadzora kubva kumagumo, asi aripo, uye zviri nyore kwazvo, ndinovimba ndakubatsira (ndine urombo nespelling XD)
Pindura kuna kevin reyes
Ndeipi sosi yekutanga yechinyorwa? Nekuti zvinoita sekunge yakadudzirwa nemushanduri weGoogle, ine zvikanganiso zvakawanda uye iwe unotaura nezve runyorwa rusingamboonekwe.
Pindura kune mymail2014
mymail2014. Rondedzero yeminda uye zvekutanga zvinodiwa zvinoonekwa mushure me "Sarudza yako Linux zvinoenderana nezvaunoda» ... unofanirwa kuverenga zvakanyatsonaka.
Ruzivo rwakanaka kwazvo, rwakaringana kuitira kuti vanhu vasina ruzivo vave nemifungo yakakwana yezve nyika ino.
Pindura kuna Apollo
Chinyorwa chakanaka kwazvo. Ndakaiwedzera kune yangu yekuunganidza muZotero
Unganidzo inogadzira muZotero ine zviwanikwa zveavo vari kungotanga musoftware yemahara, GNU / Linux uye kune avo vanga vari mune izvi kwenguva yakati.
1- Nhanganyaya 2- Kutama 3- Kunyorera 4- Kugoverwa 5- Mirairo 6- Inobatsira 7- Mapoka paFacebook neMharaunda paGoogle Plus 8- Blogs neSites.
Miguel Osvaldo (@ miko77uy) akadaro
Yakanaka chinyorwa, ini ndiri kuzogovana nekuti inopfupisa zvinhu zvakawanda zvinowanzo bvunzwa pandinokurudzira vanhu kuti vaedze GNU / Linux.
Pindura kuna Miguel Osvaldo (@ miko77uy)
Cºqɐq lǝººº▒▓█ (@el_baby) akadaro
Mundima yekupedzisira ye "Chii chinonzi kugovera?", Kutaura nezve bootloaders, kune typo uye inoti "GRUP" pachinzvimbo che "GRUB" (GRand Unified Bootloader) rinova iro zita chairo.
Pindura kuna █▓▒ºCºqɐq lǝººº▒▓█ (@el_baby)
Kurudyi, ndaireva Grub. Nekudaro, kubva ipapo ini hapana zvimwe zvandingaite. Ndiri kuedza kuiisa kubva kuDVD uye haina kundishandira kana. Ini handioni iro skrini kwandinofanira kusarudza kana ndiri kuenda nekumisikidza nemifananidzo, kana ndiri kuenda kunosvika ndisina kuisa kana kana ndiri kuenda nekuisa nemirairo.
http://bsdapuntes.wordpress.com/ shanyira iyo blog, yekufarira ma newbies
Pindura kuna fmateo05
Seyakakurumbira kwazvo nyanzvi yekuchengetedzwa kwemakomputa, muumbi weFOCA ... iyo yakanakisa uye yakachengeteka sisitimu yekushandisa ndiyo yaunotungamira, unogona kuva neLinux, Windows kana MAC system, yakachengeteka sekusachengeteka, asi zvinoenderana ruzivo rwako rweumwe neumwe. Unogona kuve nenhare nechero hurongwa.
Mune yangu nyaya chinhu chimwe chete chinoitika, ini ndinoshanda nema windows kubvira v3.1, ndinozviziva kwazvo, uye kana ndikashanda neLinux futi, asi hazvindipe kugutsikana mune zvakawanda zvinhu, vabiridzi vemazuva ano havachazvikurudzire se zvisati zvaitika, Vanoziva kuti inzira isina kusimba yekuchengetedza parizvino, uye pasina kunyepa, aya maHacker vamwe vanoti vanosarudza windows, uye ini ndakadzidza zvakawanda, chimwe chazvo ndechekuti linux haikundiki, inhema dzese, iri panjodzi senge chero OS kana kunyangwe.
Kune zvinyorwa uye maturusi mazhinji anoshandiswa kutyora masystem, ayo atove nesarudzo yeLinux, pasina dambudziko, pasina chero basa, vanotyora Linux sekunge pasina chimwe chinhu. Uye ndiko kuzvidzivirira kukuru kwevadziviriri ve linux ... ndeyekuti mu linux hamuna mavairasi ... mudzidzi wekuMexico akaratidzira akagadzira hutachiona hwe linux ... zvinoitika ndezvekuti mune linux hauzombozviziva kana paine mavhairasi nekuti iwo chete mitsara yekuraira uye zvirongwa hazvioneke, chinhu chimwe ndechekuti hapana hutachiona hwe linux uye imwe ndeyekuti ivo vanonyanya kuoma kuona, asi imi mose munei, nekuti vakaita bvunzo uye maativirusi e linux haingavaone (clamav), nekuti ivo vachiri Mu manapukeni mukuchengeteka, vachati hapana hutachiona, asi kuityora pa network, ndiyo iri nyore, ichienzaniswa nemawindo ane antivirus akanyatsogadziriswa firewall, uye pachangu ini ndinoshandisa zvirongwa zvinobvumidza iyo nguva yehupenyu hwamawindo kuti iwedzere zvakanyanya uye inoshanda mushe uye pasina kutambisa nguva yangu.
Uye zvinonzwika zvakanaka, zvemahara software, zvinoita senge utopia, uye tinovada ... asi mumwe mubiridzi akaratidza kuti mukati megwaro semuenzaniso wekuvhura hofisi v4, ine hofisi yakabatanidzwa yehofisi 97. Usanditenda, tsvaga.
Mune ruzivo rwangu ndakaedza kugoverwa kweLinux masere, uye hapana akandipa rinopfuura vhiki rekugutsikana, parizvino pane zvakawanda zvakasiyana, izvo zvinovhiringidza kunyangwe kune nyanzvi. Ndiri kufara nemahwindo, ndinoziva maitiro ekuichengetedza uye kuigadzirisa, rezinesi reGNU riri muzvirongwa zvine hukama hwakazara, uye maonero evabiridzi haandirege ndichinyepe, kana iwe uine windows, linux kana IOS, mune avo akasiyana mavhezheni , uye iwe unoziva kuiita yako simba, chero ipi ye8 yakanaka.
Sekupedzisira poindi, uyu wekubira anobatsira Microsoft nematambudziko ekuchengetedza, chokwadi vanomubhadhara iye, uye maererano nemethadata, Windows ine maturusi ekusiya mafaera ako pasina kana chako, asi mamwe maOS haatombofunga nezve izvi. chimiro.
Ruvengo rwaBill Gates, urwo ini ndinogovana, rwekuita marezinesi ake kudhura ... zvinopfuura kupfuura izvo chaizvo, matambudziko mazhinji nemahwindo anga ari nekuti iye ane mapurezidhendi anosvika, izvo zvinogona uye zvisingagone kuitwa, asi The zvimwechetezvo mukumwe kuongorora kwandakaona, dai hurumende ikasapinda mukugadzirwa kwewindows software, windows zvaisazokundwa, ndinoti ndigumburei, ndirasire kure nekusaziva kukuru, asi zvese izvi zvine chokwadi chakawanda.
Uye kana ini ndiri mune ino foramu imo nekuti ndiri kuda kumwe kugoverwa kweLinux, nekuda kwekutengesa, nekuti sekutaura kwandakaita, ndinovenga Bill Gates nekuda kweizvozvo, inodhura kwazvo uye inoparadza zvese.
Mhoro Joseph, ini ndichakupindura muzvikamu.
1-Ehe, munhu wese akasununguka kushandisa mashandiro aanoda, asi iwe unofanirwa kuziva kuti mushure mesarudzo, kana ukasarudza yakavharwa OS, rusununguko rwako runogumira ipapo. Uye iwe unotaura nezve FOCA uye pazasi iwe unotaura nezve metadata uye kusavapo kwemidziyo yeLinux ... hauna zano. Iko kune kwakasarudzika kweLinux kugoverwa kwe forensic data ongororo uye yakanangana nekuchengetedzwa kwekuongorora
2-Kuziva inoshanda sisitimu yakadzama kwakakosha pakurongeka kwayo uye kuita kuti ive yakachengeteka. Asi, sezvo iwe uchiona kuti neWindows iwe unogona zvakare kuve nesimba, ndinoda kuti undipe kirasi yekudzidza maitiro ekugadzira system yakavharwa zvakachengeteka uye kuti kana ukave nechero dambudziko kana dambudziko haugone kuzvishandura. ...
3-Iwe unoti wanga uchimhanyisa Windows kubvira v3.1, nekuti ini ndinokupa makorokoto echokwadi nekuti hauna kuneta neWindows uye hongu madistros Nekuti kana Windows NT iri chigamba chakaipa pane chimwe chinhu chisina kuitwa kubva pakutanga, MS-DOS-based Windows yanga yakatonyanyisa.
4-ini handizive kuti mangani matsotsi aunoziva, iwo andinoziva anoshanda neFreeBSD, GNU / Linux uye ndanga ndichizivawo mamwe anoshandisa Mac ... Uye izvi zvinoita kuti ndikubvunze: Chii chaunonzwisisa nekubiridzira? Chii chaunoti hacker? Ini ndinofunga kana iwe uchireva ivo vanannabes kana vanochema kunze uko kana, zvakatoipisisa, vamwe vatsva avo vane zvimwe zvinyorwa kana zvishandiso zvinotakurika vanoita zvimwe "hazing" ... saka unofanirwa kutarisa kuti hacker chii.
5-Linux haikundiki, hapana sisitimu inoshanda sezvo yakagadzirwa nevanhu uye ivo vasina kukwana, asi inogona kuve iri padhuze nepadiki pane yakanaka. Kuseri kweLinux kune vabiridzi, mayunivhesiti nemakambani akakosha asiri mapenzi zvachose. Uye ini ndinokupa iwe semuenzaniso kuti Microsoft neApple maseva kana maPstrong studio (anowanikwa neApple) anoshandisa Linux ... Ivo mapenzi here kana ivo vanoziva nzira yekukoshesa kuti Linux ine simba chaizvo uye yavo yega masisitimu haina kukosha? Nei usingashandise Mac OS X kana Windows Server?
6-Ikoko kuchave kana kusazove nematurusi ekurwisa Linux, hongu, asi ndinokuvimbisa kuti kune zvakare maturusi eWindows uye mune zvakawanda. Uye iyo mvumo sisitimu * nix masisitimu ari akakwirira kupfuura Windows.
7-Kune Linux kune mavairasi, asi iwo akapfava zvekuti unongofanirwa kuisa antivirus kuti uzvidzivirire. Pane yangu Linux PC hapana antivirus uye kwemakore ini handina kana matambudziko. Unogona here kutaura zvakafanana kune Windows? Ini ndinokudenha kuti ubvise yako Windows antivirus uye utore kufamba uchitenderera mambure… Zvakare, unoda here kuti tienzanise huwandu hwehutachiona hweWindows vs. Linux kana imwe OS?
8-Sekureva kwako, Linux ingori mitsara yekuronga uye mirairo, uye ndosaka mavhairasi asingakwanise kuwanikwa ... iwe wakandisiira ndaine ironed. Ini handitomboziva kuti ndopindura chii apa.
9-Windows super-antivirus uye yayo inoshamisa Firewall inonakidza zvekuti makambani makuru nehurumende vanosarudza kushandisa GNU / Linux pamusoro peWindows… Uri kuenda kuenzanisa WINDOWS Firewall neAppArmor kana neSELinux?
10-Utopia haisi yemahara software, ichokwadi, utopia ndeyako mune yako yakakwana Windows nyika.
11-Eight distros uye hapana wawakada, asi iwe unoshanyira ino webhusaiti nekuti urikutsvaga imwe ... Makorokoto! Zvinotaridza kuti hauna kuora moyo. Kana iwe uchifara muWindows, gara muWindows, asi usataure zvinhu zvakaita seizvi. Chero sarudzo inokudzwa, asi isina hwaro uye hutsi-hwakavakirwa maonero hahuremekedzeke.
12-Metadata, hapana trace, chengetedzo ... uri kunyatsoshandisa Windows? Ndine urombo kuseka.
13-Kubva mundima "Ndinovenga Bill Gates [...]" Handina kunzwisisa chero chinhu (zvimwe zvive, ongorora, chinangwa ...), saka handina zvakawanda zvekutaura. Asi kana iwe uchireva kuti hurumende yeUS inokonzeresa kugadzirwa kwemikova yekumashure, inokumbira ruzivo nezve masystem ekuchengetedza, kuwana, nezvimwe, kukuudza kuti zvikasadaro mamwe matambudziko eWindows haagadziriswe. Uye aya matambudziko "ezvematongerwo enyika" akajairika mune mamwe masisitimu akadai seMac OS uye, zvinosuruvarisa, kunyangwe software yemahara inobvisa izvi (asi zvirinani kuti iwe unokwanisa kuwana kodhi yekodhi kuti uzive zvazvinoita). Uye kana chako chega chekukurudzira kushandisa yemahara software iri mutengo wemalayisensi uye ruvengo rwaBill Gates ... saka zvinosuwisa sei.
Kwaziso kune ese linuxeros uye pasi remahara software mune zvese. Kuti vanokodzera kuzivikanwa nekuremekedzwa, kunyangwe kana vasiri kuwana izvo zvavanofanirwa, uye zvishoma nezvakataurwa nevashandisi vakaita seiyi.
Joseph, ndiri kuona kubva kumashoko ako kuti uri rookie. Mune linux kuyedza akati wandei distros hazvireve chero chinhu.
Ndanga ndiri mune ino "nyika" kubvira '85, ndakashanda nezvose zvigadzirwa zveMS (pachokwadi ndinoramba ndichishanda nayo). Uye Ms vari kuita shanduko yakafanana neIBM 3 makumi emakore apfuura (haina kufanana).
Iri kusanganiswa mumakambani, Linux iri kudya chinenge zvese: VMS, dhatabhesi, Kwakanyanya kuita, ERP, nezvimwe. Hongu, mumatafura emabhizinesi inoramba ichitonga, asi huzivi hwacho huri kuchinja zvishoma nezvishoma munzvimbo zhinji dzevatengi vatete (citrix uye zvigadzirwa).
Linux ndiyo ramangwana mumakambani, kana ikasatora rwendo rweLinkedIn.
Pindura kune goboeloscuro
Dzidza kunyora kutanga wozonetseka nezve yako inoshamisa mhepo jerk, zvirokwazvo iwe unogona "kubhadhara" iwe imwe rezinesi yekudzidza chiperengo nekuti maziso angu achiri kurwadza nekukuverenga iwe
Pindura kune bacillus
Anodiwa Joseph, iwe unofanirwa kuenda kuburikidza nespell checker kana kunyatsoteerera kuchinyorwa chekuburitsa mazano, kunyangwe yakanaka kwazvo maonero uye ichinyatso kushanda, haina kutendeseka sezvo iwe uchichiwana chisina kunyatsotsanangudzwa kusvika pari chiperengo. (hapana mhosva)
Yakanaka ruzivo, ndanga ndichishandisa Ubuntu kwekanguva uye yanga iri yakanakisa
ivan aroa akadaro
Chinyorwa chakanakisa chinotsanangura zvishoma zvezvinhu zvese uye ndechekuti Linux inyika huru ine zvisingaperi zvekuvhura sosi maturusi, ini handichinje Linux yangu chero chinhu uye ndakaedza Windows neMac ichokwadi kuti vakanaka asi Linux ndeye vanhu vevanhu uye vari mahara rave kutonyanya kusimba kupfuura mamwe
Pindura kuna Ivan Aroa
jonas uscanga akadaro
Kunyangwe amai vangu vane ruzivo rwushoma kwazvo rwenyika yehunyanzvi, iwe unoda kuvaona vakatsamwa, iwe unofanira kungovapa pc ine mahwindo, ivo vanopopota uye vanodzora kuti anononoka uye anogumbura sei
Pindura kuna jonas uscanga
Enrique Garcia mubatidzi wemufananidzo akadaro
Zviri nyore KUShamisa IYI NYAYA, NDINOTENDA SHAMWARI YANGU, ndakainakidzwa zvakanyanya kunyangwe ndanga ndichishandisa nix kubvira Caldera 2.4, nhasi Kubuntu, Debian nezvimwe zvakadaro.
Pindura Enrique Garcia
Alt + Tab akadaro
Chinyorwa chakanaka kwazvo, ini ndichachigovana pane yangu blog Kune avo vangade kutanga munyika yecomputer uye programming, haina kumbononoka kutanga! tishanyire http://www.altabulador.com, tinotaura nezve programming, windows, linux, software nezvimwe nyaya.
Pindura kuTab + Tab
Joaquin Bresan akadaro
Yakanakisa mupiro shamwari, yakakwana kwazvo. Ndatenda zvikuru nekugovana nazvo.
Pindura Joaquin Bresan
Ini ndoda kuyedza Linux uye peji rino rakandibatsira zvakawanda kuziva kwandinofanira kutanga kutsvaga ruzivo. Ndanga ndiri Mac uye Windows mushandisi, ini handisi nyanzvi, kana kubiridzira, kungoshandisa uye chokwadi ndechekuti Windows yakandibhowa, zvinova ndizvo zvandiri kushanda nazvino. Kutenda neruzivo, ndinofunga kuti, kunyangwe zvinotaurwa naJoseph, kune mumwe munhu anoda kupinda muLinux zvakanyatsokwana.
kune izvo idiot joseph anouya kune ino peji kutaura kuti yakawanda sei peni… .. iye anogona kufunga nezvazvo.
mutsauko wemaforamu aya kune evanokunda ndewekuti pano kana isu tikabatsira kana kubatsira, iyi ndiyo nzira iyo distro yerubatsiro rwemunhu wese yakaumbwa, kwete mhando yakapusa inoita chero chainoda kutora homwe dzayo kana iwe uchandiudza kuti wako joseph (kutenga zvese) uchave nemarezinesi abhadharirwa zvese?
kwekutsvaira nekukorobha kunotevera newe uye nehunhu hwako, usauye pano kuzogunun'una kuti hauna mufaro.
PS: Ndanga ndichishandisa linus kubva 2006 uye handina kuzodzoka
Ndatenda kwazvo shamwari.Ndiri kutanga munyika ino yeGNU / Linux uye foramu iyi inobatsira kuenderera mupasi rino.
pane zvikonzero zviviri chete nei ndisingachinjike kune linux, ini ndagara ndichiona ma distros avo ese sechinhu chevashandisi vepamberi uye chakaomarara (ndakaedza kuisa Java pa ubuntu uye ndainzwa kupusa) uye nekuti ndinoda kutamba pakombuta uye mumahwindo iyo catalog yakakura kwazvo kupfuura mu linux kunyangwe ndichivimba kuti zvinoshanduka
DAVHIDHI GARCIA akadaro
sudo apt-tora kuisa icedtea-7-plugin openjdk-7-jre
iwe unopa pinda uye rega itore
Pindura kuna DAVIDI GARCIA
Carlos Nicolini akadaro
Isaac enda kuUbuntu software Center woisa Java muinjini yekutsvaga uye iwe unowana dzimwe sarudzo, sarudza iyo yaunoda, uipe iyo yekuisa, ipapo password yako yemushandisi uye ndizvozvo ... rombo rakanaka
Pindura carlos nicolini
chinyorwa chakanaka kwazvo, ndatenda neruzivo
Yony ​​Causillas akadaro
Ndiri kutanga kushandisa Opensuse mumaitiro angu uye ndakaiwana ichifadza kwazvo; Ndokumbirawo kuti uve une moyo munyoro kundiudza iyo yekumisikidza mirairo ndine mamwe matambudziko mune iyo ……. Uye ndinokutendai zvikuru neruzivo, kusahadzika kwangu kwakajekeswa ...
Pindura Yony Causillas
Iyo inonyanya kushandiswa distro pane maseva, uye nekure iri Debian
Pane kusawirirana kwakawanda, kunyangwe muLinux sisitimu yega yega yakachengeteka semushandisi kuziva kuimisa, ndinokurudzira kuti iwe uise arch Linux, ndanga ndiripo kwechinguva uye zvinoshamisa kuti zvinoenderana nechero zvese. iwe unofanirwa kuisa ruoko rwako mairi
Ndine linux mint, kunyangwe ini ndakaedza akati wandei ma distros, pachokwadi ndakatenga iyo chete linux magazini yaive kuSpain, uye ikozvino inouya muChirungu kubva kuGerman, iine imwe kana maviri distros kuyedza. Ini zvakare ndine windows. Ini ndakaisa gnu / linux mint mukirabhu yenhabvu kwandiri mushandi pamwe uye ndinoona maitiro evamwe vangu, vamwe vacho havazvifarire nekuti havazvizive. Iko hakuna linux tsika. Asi chavanoita kurumbidza ndechekuti iyo xp isati yapararira uye mazuva ese zvakatowedzera uye zvaidikanwa kuomesa uye kuisazve kuti zvifambe zvakanaka kwenguva yakati. Asi ikozvino neMint hainonoke, zvinogara zvakafanana, zvinoshanda zvinotyisa. Ndine chinhu chimwe chete chasara, icho chandinotarisira kugadzirisa, uye ndiko kuisa Photoshop muMint. Pandinoita ndinenge ndosiya mahwindo. Uye haina kufanana neGimp. Zvinonyadzisa kuti ingangoita software yese ndeye windows, asi maGates akaibata nenzira kwayo, akarega msdos 3.30 uye iyo 5.0 kopi isina matambudziko, ipapo windows 3.11 kuitiswa, uye pakabuda 95, vazhinji vakaitenga, vatove yaive tsika yakasikwa. Kunyangwe zvakadaro, ndinoirega ichiteedzerwa uye makumi mapfumbamwe neshanu, kuti ndipedze kuwedzera. Kubva pakuona kwangu ndinobudirira. Iye zvino ndinofunga inguva ye linux, kwete nekuti ndeye mahara, kana yemahara, asi nekuti zviri nani. Asi iwe unofanirwa kugadzira tsika. Uye ndiko kuzviisa pamakomputa eshamwari, uye tsanangura. Hongu, kubatana kushoma kwevatyairi uye zvimwe Dzimwe nguva zvakaoma. Ngatirege kukanganwa kuti mumawindows isu tinongomhanyisa setup.exe, inogona kunge iri Trojan.
Ndine network yevhidhiyo yemutambo bhizinesi ndichishandisa yechinyakare Windows OS. Ini ndiri mutsva kuLinux nyaya, ndinogona kuisa VALVE uye ndichiri kupa mimwe mitambo pane iyo network? Tichifunga kuti vanoisa vakagadzirirwa maWindows masystem. Kana kuongorora kwangu kusiri iko, regerera kusaziva kwangu.
Mangwanani, kutanga makorokoto pachinyorwa ichi. Ini handisi komputa "crack", asi pane imwe yemamirioni evashandisi vekombuta vega. Ndiri kutsvaga imwe nzira ye "windows" (zvichave here kuti ndiri kusvika ……. Kwaari?, Ichave iri), ini ndine CPU ine Intel i5-3550 pa3.30GHz uye 8 GB ye RAM, 1 Tb ye hard disk, Windows OS 7 yemhuri premium. Chinyorwa chako chinojekesa zvimwe zvinhu zvandanga ndisina zano, semuenzaniso: Ini ndaifunga kuti LINUX yaive OS, asi ini ndinoona kuti haisi. Kune izvo zvandinoda kuita pakombuta yangu, ini ndaizoisa ArtistX kana Ubuntu Studio, ndinofarira kutora mifananidzo uye cinema, zvakare mwanasikana wangu anodhirowa uye anoda kutanga kugadzira rake ega manga. Zvichipa kusaziva kwangu kukuru, ndinoda kuti unditungamirire zvishoma kuti ndiise distro, chinangwa changu kuisa imwe 1 Tb hard disk uye kuita kuti yekupedzisira ishande nedistro nyowani, zvinosuruvarisa kwenguva yandinofanira kuchengeta windows kubvira Mudzimai wangu anozvipira mukugadzira kubheka uye anoshandiswa kubata windows, ndinovimba kuti zvishoma nezvishoma anotanga kushandisa iyo nyowani distro uye nekufamba kwenguva anoita kuti windows dzinyangarika zvachose kana kuishandisa kune zvimwe zvinhu chaizvo. Ndine mibvunzo chiuru nechimwe inoda mhinduro. Ini ndinonzwisisa kuti pamwe iyi haisi iyo nzira yakakodzera kwazvo yekuzvigadzirisa, saka ndinokumbira iwe, hongu kana uchida, kuti undibatsire kugadzirisa kusahadzika kwangu uye nekuisa iyo distro. Regerera kushinga kwangu kukumbira rubatsiro rwako uye ndinovimba ndakanga ndisiri kunyanya kufinha. Kana uchida, nditumire mhinduro yako kune yangu email. Shuwiro yakanakisa
Pindura kuna René
Mhoro rene. Ehezve, zvinogara zvichikurudzirwa kuchengeta yako Windows system, kunyanya kana iwe wakabhadhara iyo haha. Ini handizive kuti yakawanda sei nzvimbo yaunoda kubva kune iro rakaomarara dhiraivha, asi kazhinji ne1 Tb iwe unofanirwa kunge uine zvakakwana kuti ugovane uye nekuisa GNU / Linux distro pairi.
Ehezve, kana iwe usati wambopatsanura hard drive, chenjera izvo zvaunotamba. Kana iwe uine yakasarudzika yakakwana Windows system partition, kana zvisiri nyore wobva waderedza iyo partition nzvimbo neWindows kubva paWindows kuti uchengete ndangariro iwe yaunoda yako nyowani yekushandisa system Chero zvazvingaitika, unogona kugara uchiedza iyo distro muhupenyu uye kana iwe uchida kuiisa, tsvaga zvakanaka usati wapatsanura diski.
Nezve iyo sarudzo ye distro, yemugadziri iwo maviri akaiswa pano akakwana kushandisa live, ndiko kuti, ivo vakatakura yakawanda dhizaini software inogona kushandiswa pasina kuisa iyo inoshanda sisitimu. Mune ruzivo rwangu, iyo distro iyo yakandipa mhedzisiro yakanaka ne newbies anga ari Xubuntu kana zvasvika pakujairana nenharaunda nyowani, chinhu chega chasara kuisa mashandisiro aunoda kushandisa (Krita, Blender, Inkscape, .. .)
Chero zvazvingaitika, tarisa muhupenyu kuti zvese zvaunoda zvinoshanda usati waisa, izvo zvingangoita.
Pindura kuna TheFaico
Mhoroi, ndatenda nezano rako. Iwe ungandiudza here ini zvandinofanira kuita kuyedza iyo distro muLIVE? Ndingawanepi kuritora kubva? uye kana zvese zvikafamba mushe, ndozviisa sei? Ndichariisa pane rakaparadzaniswa rakaomarara dhisiki, saka ndichave nediski remawindo uye imwe ine linux, yechipiri dhisiki ini ndinotora mukana weimwe komputa yandaive nayo.
Mhoro rene. Kudhanilodha iyo iso yedistro haina chakavanzika, iwe enda kune iyo peji rewebhu rinokufarira, semuenzaniso, http://artistx.org/blog/download/ , https://ubuntustudio.org/download/ o http://xubuntu.org/getxubuntu/ . Kuti uedze kuti irarame iwe unongofanira kupisa iso kuDVD kana pendrive, kune izvi iwe unogona kushandisa chirongwa senge http://www.linuxliveusb.com/ o http://unetbootin.sourceforge.net/ iyo inokutendera iwe kurekodha kune usb drive zviri nyore.
Kupatsanura kunogona kuve kwakaomarara pakutanga asi kana iwe uine imwe yechipiri dhiraidhi dhizaini iwe uchave nemukana uri nani wekubudirira, unogona kutsvaga akawanda ekuisa magwara pamambure seizvi http://www.muylinux.com/2014/07/09/guia-instalacion-basica-ubuntu . Zvino iwe unongofanirwa kuyedza, pamwe pamwe iwe zvakare unofanirwa kubata imwe paramende yeiyo bios kuitira kuti komputa ikwanise kubhuroka kubva kuCD / DVD kana USB drive http://administradordelared.com/cambiar-el-orden-de-arranque-en-la-bios/
Ndatenda zvikuru nerubatsiro rwenyu. Ndiri kuzoenderera mberi nazvo uye tichaona zvinoitika. Shuwiro yakanakisa
Rubatsiro !!!, Takatanga zvakanaka, ini handizive kuti sei asi ini ndinoedza kurodha pasi iyo ISO mufananidzo kubva kuArtx kana kubva kubuntu studio uye handigone kuwana nguva dzose 'isingazivikanwe network kukanganisa' meseji. Ndakaedza kurodha pasi kakati wandei uye inogara ichitaura chinhu chimwe chete, handizive kana zvakajairika asi kurodha pasi kunotora maawa mashanu muartixx uye munenge hafu yekumira kurodha uye meseji yekukanganisa inoonekwa uye neiyo studio studio zvinotora anenge mashoma maawa maviri nehafu kana kudaro meseji yekukanganisa inoonekwa. Handizive zvekuita. Ndiri kuita chimwe chinhu chisina kunaka asi handizive kuti chii. Ndinoitora kubva http://artistx.org/blog/download/ , https://ubuntustudio.org/download/. Pane imwe nzira yekuzviita here? Ini ndaida kuyedza zvinoshandiswa kubva kuUSB ndisati ndaisa imwe yacho.
Mhoro rene. Kubva pane zvaunotaura, zvinokwanisika kuti kubatana kwako kunetiweki hakukurumidze uye zvinoita sekunge pane imwe nguva kunofanirwa kukundikana iwe. Chinhu chakanakisa ndechekuti iwe utore iyo iso nerukova iyo ichaenda zvirinani.Uye hazvina basa kana Internet ikakundikana, unogona kuenderera kubva pakamiswa kurodha pasi zvakare nekudhirowa kwakananga.
Shamwari, ini ndaive ndaisa Linux Ubuntu 14.04 asi mazuva mashoma apfuura ndakawana system kukanganisa iyo isingandiudze iko kukanganisa uye mushure mechinguva zvese zvinhu zvinotonhora uye ini handigone kuita chero chinhu chandakaedza kuchidzorera icho nerunyowani vhezheni ye Ubuntu asi inonditevera Ichioneka chikanganiso chimwe chete uye ini handichagone kuita chero chinhu asi kutangazve uye kuisa windows kutsvaga rubatsiro.Ndinokuudza kuti ndine gigabyte h61mds2 mamaboard, yakakosha i-3 3.4ghz processor, 4gb ndangariro uye ge simba 210 kadhi revhidhiyo kubva kuna nvidia. Kukanganisa kunondiudza: kwave nehurongwa hwekukanganisa iwe unoda kumhan'ara dambudziko izvi zvinoitika kubva pandinotanga pc kana ndikasazviteerera iyo pc inoshanda semaminetsi mashanu kana ndikaipa zivisa ini inoratidza imwe chikanganiso uye inotonhora pakarepo ini ndinovimba uye mumwe munhu anogona kundibatsira maererano
Pindura kune danyel_692_3@hotmail.com
Ndiri kuenda kunonyora mutsauko uripo pakati peWindows neGNU / Linux. Kana Windows yakaiswa, chete mashandiro ehurongwa uye mashoma ekushongedza anoiswa, ayo asingashandiswi nemunhu, pane hunhu hwepfungwa muvanhu vanotoziva zvirongwa zvavari kuzoisa nemazita uye mazita (kusanganisira makatsemuka nema serial). kuti nyaya yacho haiperi nekuisa Windows, odyssey ichangotanga.
Munyika yeGNU / Linux pane akasiyana mikana, nekukanganisa iyo kernel iLinux uye kune imwe nhanho yemapakeji eGUU mapakeji ayo ndiwo anotendera kubatwa kweiyo system kubva kune terminal koni kana CLI modhi, hapana graphical. mune aya mapakeji.
Ikozve kune ma distros kana kugovera, chinangwa ndechekuisa paCD kana DVD iyo Linux kernel pamwe neiyo GNU base CLI mapakeji, pamwe nenzvimbo yakajeka iyo inogona kuve maneja wewindows kana desktop kana desktop, kune akati wandei graphical nharaunda uye distro yega yega inosarudza imwe kana kupfuura kuisa paCD kana DVD, asi imwe chete inogona kushandiswa panguva.
Pamusoro peizvi uye zvinoenderana nebazi kana basa rekuparadzira kunongedzera, zvirongwa zvemifananidzo zvakaiswa zvinoenderana nebazi kana basa, kunyangwe paine zviripo pane saradhi yeRussia yemavara uye manakiro.
Musiyano uripo pakati pevashandisi vevashandisi kana vashandisi vevashandisi nevashandisi vepamberi ndezvekuti kune avo vevashandisi vemberi, panowanzo kuve nekuchinjika mugadziriro yekumisikidza, hapasisina zvirongwa zvinotsanangurwa zvakaiswa hongu kana hongu, asi mushandisi anosarudza akanakisa Windows maitiro asi asina kutsemuka kana serial.
Edza kutsanangura izvi kuvashandisi vari kutanga uye vasingazive kana kusanzwisisa mutsauko uripo pakati peWindows yavo uye zvakaita nyika yeGNU / Linux.
Iwo akanyanya kufambiswa ma distros iLSB Slackware Gentoo Debian… ..theros dzokutanga nemint ubuntu kubuntu
Ndine urombo kana paine chero zviperengo zvikanganiso, ini ndapererwa nenguva yekuzvigadzirisa.
ndinoshuvira kuve ne debian zvakare :)
Mhoroi, kuisa windows paPDA zvinogoneka, chinhu chinonetesa ndechekuti pasuru yekuvandudza inodhura uye haisi nyore kubata, shanduro dzakachipa hadzisi dzechinyakare, asi zvinokwanisika, zvinokwanisika kunzi kushamisika kwakapindirwa uye parizvino inonzi wondows mobile, pachangu ndiri kuda kutamira kune linux nekuti zvinoita senge iri nani sarudzo, chirevo changu chakanangana nekusaudzwa zvisizvo.
- Linux mune iyo Server nharaunda, maratidziro uye zvirongwa ndizvo zvakanakisa nezvandakashanda. Ikozvino kune dhizaini yekugadzira uye yekugadzirisa zvirongwa ipfupi, ini ndinoshanda nefotosop uye Gimp haifukidze iyo neimwe nzira, ipfungwa yega
- Windows haina kushata sekufunga kwevanhu vese, iwe unowana chero chirongwa chevashandisi uye nehunyanzvi nharaunda, kuitamba ndiyo yakanakisa chikuva chandakaedza. Ndakaisa linux kuvanhu vazhinji, vamwe vakagara nelinux uye havana kusiya, uye mumwe akadzokera kumahwindo pasingasviki vhiki uye achibhadhara rezinesi.
- Pachangu Windows uye OS X yevhidhiyo dhizaini uye yekugadzirisa ndiyo yakanakisa iripo. Kune mamwe ese Linux, OS X neWindows zviri par.
- Kukanganisa kweWindows neOx X maringe neLinux, zvirongwa zvehunyanzvi zvinodhura kwazvo $$$$$. Apple ine mutengo wakakwira kwazvo kune ayo maGadget, zvese zvinotariswa pane zvaunotenga muchitoro cheapp. Microsft ine mutengo wakakwira mumahurongwa ayo ehunyanzvi uye server, uye maturusi ayo ekuvandudza anodhura. Windows, iri OS yakapararira, ine huwandu hwakanyanya hweVirusi, Malware uye spyware.
- Ndine komputa ine Linux / Windows PC uye Mac, handigone kukuudza kuti ndosarudza ipi nhasi.
Ini ndinokurudzira vanhu kuti vaedze linux uye vasarudze kuti ndeipi distro yavanoda yakanakisa, zvakare kuenzanisa neimwe OS uye kusarudza kuti ndeipi yavanoda kwazvo uye kuzadzisa zvido zvavo.
Aya ndiwo maonero angu, anogona kuve akanaka kana akaipa seanowani.
Yakanakisa pfupiso uye mazano ehungwaru. Pamwe mamwe marudzi evashandisi aripo, senge iwo anozvida zvese (Debian). Parizvino ini ndinoshandisa Fedora, inokwezva asi ini handifarire nzira yacho yekuvandudzwa, kunyangwe kuenderana nezvose zvishandiso zvandanga ndichishandisa pamusoro pemakore-mazhinji, zviri zvakakwana.
Pindura kuna VictorJ
Aaron Contreras Garibay akadaro
Mukuru ndinokutendai zvikuru.
Pindura kuna Aarón Contreras Garibay
Mhoro uye zvakanaka kwazvo,
Ndiri newbie yakazara kana zvasvika pakombuta. Ini ndinongodzora zvinozivikanwa nemunhu wese, chii chinonzi Hardware: kutonhora kwemvura, kuvaka pc, nezvimwe.
Ini ndinonyora pano nechinangwa chekutanga kuronga uye ndanzwa kuti zvirongwa zveLinux zvirinani, nekuti zviri nyore kuumbiridza nekubvisa maraibhurari. Kubva pane pfupiso zviri pachena kwandiri kuti Insert kana Kainier vakanakira masayendisiti emakomputa kunyangwe ini ndisingazvione sendakadaro. Naizvozvo, ini ndaida kubvunza kuti ndeupi mugove waunokurudzira.
Mhoroi, ndichitaura nezvekuti mavhairasi angarwisa sei imwe kana imwe OS, ndinoda kutaura pane zvinotevera:
Mavhairasi anogara achipinda zvakafanana chimiro chevanhu. Ndanga ndichishandisa Windows hupenyu hwangu hwese.Handina kushandisa antivirus kwemakore matatu uye handizive chinonzi hutachiona. Ini ndinofamba-famba sewebhu yakawanda sekuda kwangu, ndinotora pasina tsitsi kubva kunzvimbo dzese uye ndinoda kuyedza marudzi ese ezvishandiso Mavhairasi uye Trojans "hwema." Ini pachangu, ndinofunga iwe unofanirwa kuve unononoka kana kuve nerombo rakaipa kwazvo kuti utapukire hutachiona. Uye maTrojans anoonekwa achibva kure uye anobviswa zviri nyore. Chinokosha ndechekuti kuchengetedzeka hausi mubvunzo weiyo OS, iwe unongofanirwa kuve neminwe miviri pamberi pekombuta. Uye maererano neLinux, ndinoda kuzviedza uye ndione mafambiro azvinoita pamusoro pemakore, asi… ini ndoda software yese inomhanyisa yeWindows, nyore, kugadzikana uyezve, kana iwe usingakwanise, unotsvaga hupenyu . Kune programmer inogona kukwana. Kune mushandisi wenguva dzose, Linux chimwe chinhu chinoiswa, unozvitarisa zvishoma, uye kana iwe ukaona kushaya simba kwekusava neyakajairwa software muWindows uye kuomarara kwayakaita kugadzirisa chimwe chinhu, unoibvisa wobva wadzokera kuWindows. . Bravo! kune avo vanosarudza kupinda muLinux, dzidza maitiro ekuibata, nezvimwe ... Asi kuuya kumba neLinux sechinotsiva Windows ndiko kurota kweupenzi uye kunyepedzera kwaungave nako. Mahwindo akagadzirwa kuitira kuti chero munhu asina kana hunyanzvi hwemakomputa awane mhinduro. OS X yakagadzirirwa madummies uye Linux kune nyanzvi. Kwazisai vese.
Pindura kuna Knight
Ndiri kuyedza kuisa iyo "artistx" distro pane hard drive. Pandinotanga kuisirwa, sarudza kuti komputa ishande nemawindows 7 uye linux, ini ndine maviri madhiraivha akaomarara, 2 ane windows 1 uye imwe yekuisa artistx, iro rakaomarara dhiraivhiti rekuisa artistx rakamisikidzwa mu »ext7 ″. Pakupera kwekumisikidzwa ndakawana yekukanganisa meseji. Ini ndinonyora zvarinoreva zvayakataura: (Haikwanise kuisa grub mu / dev / sdb. Kuitwa kwe "grub-install / dev / sdb" kwakundikana. Uku ndiko kukanganisa kunouraya.)
Izvo zvinondipa iyo sarudzo yekuchinja nzvimbo yeiyo boot system, ini ndaedza dzese sarudzo uye inogara ichindipa izvo zvakafanana chinhu.
Chandinoda ndechekuti pandinotanga komputa zvinondipa sarudzo yekuzviita mumahwindo kana linux. Kana paine chero munhu anokwanisa kundibatsira, ndingafare zvikuru. Kwaziso. René
Mhoro rene! Ndiri kufara kuona kuti iwe watove wafunga kuisa iyo yekushandisa system, ndinofunga kuti watozviita, iwe unongofanirwa kukunda chipingamupinyi chekupedzisira.
Ini handina kumbobvira ndave nedambudziko rakadaro nekuti ini ndagara ndichipatsanura imwe hard disk, asi zvinoita sekunge grub inopa matambudziko kana iwe uchida kuiisa pane imwe yakaparadzana diski. Pamwe unogona kuwana imwe mhando yemhinduro, asi zano rangu nderekuti, kuti iwe uise zvese pane iyo yechipiri hard drive sezvawakaita kusvika ikozvino, asi isa boot booter muchikamu chimwe chete se windows, mune yako kesi, / dev / sda. Aya ndiwo mashandisiro aanofanira kuita uye rega iwe ubhuye mukati maWindows uye Artistx.
Chinhu chega chinokanganisa kuchengetedza mupfungwa ndechekuti kana ukaburitsa yako nyowani yeGNU / Linux sisitimu inoshanda, iwe waizodzima iyo grub uye waisazokwanisa kubhuya muWindows futi, zvaizokupa iyo grub kununura meseji
Ndinokutendai zvikuru nerubatsiro rwenyu, nekukurumidza pandingagone, ndichaedza zvakare nekukanda iyo starter pane imwechete diski se windows, zvinogona kutora nguva kuti uzviite sezvo ndiri kufamba uye iyi inyonganiso. Shuwiro yakanakisa
Great post hama !!
Ndanga ndichienda kunharaunda yeLinux kwemakore maviri kana zvakadaro, kuyedza akasiyana distros, asi ndafunga kunamatira naUbuntu. Ndakagadzirisa nekukurumidza, shanduko yangu kubva paWindows kuenda kuMac Os kuenda kuLinux yaive nzira yakanaka kubvira pandakadzidza zvakanakisa uye zvakaipisisa kubva kune imwe neimwe, handigone kutaura chero chakaipa nezveLinux, zvese zvinoita kunge zvakakwana kwandiri.
Ini ndawana yako posvo yekutsvaga kumwe kugovera kwekushandisa uye kuramba uchidzidza, ruzivo rwakanaka kwazvo nezve zvese zvaunopa, ini ndichazvipfuudza kushamwari zhinji dzinova graphic designers, vanondishora nguva dzese idzo neMac OS vanogona kuita zvirinani dhizaini nePS, kana chiri chishandiso chakanaka asi mumagirafu uye dhizaini chikamu icho iwe chaunopa, iyo OS yandakanga ndisingazive nezvayo, ndakaitora kuti ndiedze mumuchina chaiwo uye ndokudzidzisa iwe kuti Linux ine simba rezvinhu zvese.
Kwazisai munharaunda yeLinux !!!!
Mhoroi, ini ndanga ndichida kubvunza kana iwe uchigona kuve nemaviri linux kugovera pane imwechete pc, ndinoreva kuti, semuenzaniso, ndinoda kuisa iyo ArtistX uye zvakare iyo SteamOS, kana zvichibvira, ndiudze sei uye ndokutenda (pdt; Ini ndiri mutsva kune iyi linux saka ndine zano diki kwazvo)
Pindura kuna Jose Antonio
Mhoroi, unogona kuva nema distros akawanda paPC imwechete. Vaviri kana kupfuura ... hapana dambudziko. GRUB, iyo Linux boot loader ichavaona uye inobvumidza iwe kusarudza iyo yaunoda kubhowa paunobatidza PC yako.
Mhoroi, zviripachena kuti handina kuverenga ese makomendi akapihwa huwandu hwayo asi iwe uchaona ndichipindura zvishoma nezve ruzivo rwangu ndakapedza hupenyu hwangu hwese neWindows uye pane dzimwe nguva ndakaedza Ubuntu, musoro wenyaya wekutaura muchidimbu ndewekuti izvozvi Ndine musikana mune imwe nyika uye isu tinoshandisa skype zvakanyanya, kekupedzisira pandakaiyedza pane ubuntu yakashanda zvakanyanya, haina kuziva mafoni.
Icho chikonzero, chokwadi chinofanira kutaurwa, ndechekuti ini handina yekutanga kopi yemahwindo uye iri kutondiudza kuti haisi yepakutanga, saka handizive kana ndikapedza nguva yakawanda ndichifunga kuti ndingaigadzire sei yekutanga kana kwete, Ini handizive kana iri nyowani nyowani kana chii asi chokwadi ndechekuti ini ndinofarira windows nekuti iri yemahara software iyo ini handifanire kunetseka nezve kuimisa uye kunzwa zvakashata nezvekuita chimwe chinhu chisiri pamutemo. Ini ndinoda kushandisa chinhu chemahara uye kana zvachose ndopa kune iyo kambani inogadzira
Musoro uyu unotevera, ini ndinoshandisa Diablo III uye Skype zvakanyanya, ndiwo mapurogiramu angu makuru, ndisingatauri anenge akasarudzika, uye kunze kwefosi, saka ndeipi hurongwa iwe yaunokurudzira? Ndakaona steam os asi zvinoita sekunge parizvino haina kugadzirwa uye kana ndisingakwanise kushandisa skype nekuti yakaipa kwazvo saka ndechipi chirongwa chandingashandisa multi-chikuva chisiri Windows uye zvinofamba zvakanaka?
droman1976Daniel Roman akadaro
Ini ndinonyatsoda ichi chinyorwa uye ini ndiri kungokupa iwe asi.
Kushungurudzika haisi hutachiona, iguru…. uye nekudaro haina kupararira pakati pemakomputa.
Pindura kuna droman1976Daniel Roman
Jaime Tellez akadaro
Kana ndikazowana hutachiona zvakadaro, ndingashuva kuti ive yemahara. Ndinogara neLINUX
Pindura Jaime Téllez
Mhoroi, mumwe munhu angandiudza kuti ndeipi yakanakisa linux server uye ndeipi yakanakisa linux kune vashandisi, ini ndinobvunza nekuti ini ndinoona kuti kune infinity yemhando dzakasiyana dzeOS asi kune vekupedzisira vashandisi uye hapana chaicho chinoti iyi ndiyo zvakanakira iwe kuti uite uye undo
Ndakave nekusahadzika kumwechete kudzamara ndafunga kuyedza, zvavanotaura hazvisi izvo zvavanokurudzira asi izvo zvaunoda ichokwadi, ini ndiri kushanda naDebian kuseva uye ne ubuntu yekombuta yangu ... ndiri kuita zvakanaka nezvose asi ndezve zvakasiyana zvinodiwa ... enda mberi uye edza !!! (Ini ndichiri kuvenga kuti mimwe mirairo yakasiyana kune akasiyana mahara, asi iwe unogara nayo ... pakupedzisira inozarura pfungwa dzako zvakanyanya)
Yakanaka chinyorwa, yanga iri tsananguro yakanaka kwazvo yeGNU / Linux sisitimu yekushandisa uye yega yega yemikana ingangotarisana nemunda wavanoda kuvandudzwa. Ini ndinofunga kuti chimwe chezvakanakira icho Microsoft inoramba ichive nacho, uye kwete chaizvo pamusoro peLinux, ihofisi yayo otomatiki… rega nditsanangure, hofisi yakanyanya kujekesa, hushamwari uye nyore kushandisa kupfuura LibreOffice kana OpenOffice. Handizive kana paine mamwe mahofisi emahofisi eLinux, nekuti ndiwo ega mairi andakaziva.
Asi sezvo iyo Post isiri yemapurogiramu ehofisi asi nezve chikuva zvakadaro, uri chokwadi Linux inofanirwa kunakidzwa uye kunyangwe iko kukosha kwayo kuri kuishandisa pamutsetse wekuraira, shanduko yeDesktop yayo yanga iri pakakwirira kana mune dzakawanda nguva dzakakwirira kupfuura Windows.
ndinokutendai neruzivo rwenyu. yakanga iri rubatsiro rwakakura kwandiri.
Ndatenda nekugovana ichi chinyorwa chinonakidza. Yakanaka kwazvo kufunga nezvayo, pakusarudza kugoverwa kweLinux, iyo inonyatsoenderana nezvatinoda.
Tine kosi yekutanga pane kugoverwa kweLinux, iyo inogona kufarira nharaunda. http://www.educa.net/curso/primeros-pasos-en-distribuciones-linux/
Pindura kuna Educa.net
Ing mu fritangas akadaro
Semazuva ese makomputa uye kusapindirana kwavo, ndave nemavhiki maviri ndichiedza kuburitsa windows kuisa puppy linux uye hapana, kunyangwe ndazvipa zvakadii mupaneru wekutonga, kusunungura chirongwa hapana zvachose, inozvidzivirira kuti igare, windows uye zvipingamupinyi zvacho senguva dzose, kana iwe wagadzirira !!! Hahahaha XD
Pindura Ing mu fritangas
Iwe unogona kutaura kuti chinhu chake ndicho chinhu chefritish ... ini handizive kuti mutongo upi wemashoko ake wakanyanya kusanzwisisika !!!
Claudia Munoz akadaro
Anodiwa ndine basa rekuita:
Sechirongwa chega, akaronga kuti agadzire yake yekushandisa system yemaseva
zvichibva paLinux. Kune izvi unofanirwa kuziva zvimwe zvezvipo zviripo zve
Sarudza imwe yacho uye ishandise sehwaro kutanga kwako kukura.
Nezve budiriro iyi urikufunga kushandisa sevha neinotevera
 Intel quad-musimboti 3,10 GHz processor
 8 Gb ye RAM ndangariro
 1Tb hard disk
1. Ndeupi kugoverwa kweLinux kwemaseva waungashandisa uye nei?
Idzo sarudzo ndedze:
 Tsvuku Hat
Pindura kuna Claudia Muñoz
Cesar Montes akadaro
Ndinoonga chinyorwa ichi, chinoratidzira kwazvo kana uchitanga neLinux
Pindura kuna César Montes
Ndeipi yekugovera ndiyo yakanakisa yekugadzira michina yemahara uye yemahara yevhavha ndiyo yakanyanya kunaka
Mhoroi, ini ndiri Injiniya weElectroniki uye ndinoda kutanga muLinux, zviri pachena neBuntu, asi kuti ndiende kumberi ndaida kurodha pasi CEELD uye handina kuwana chero nzvimbo yekuirodha pasi, ndingafarire kana mukwanisa kunditungamira.
Uine zvombo neruremekedzo rwakafanira, saka iyi yaisazove nzvimbo yako, wadii kutora rwendo rweWindows forum, pamwe ivo vanogovana iwo maonero uye kuravira. Ini ndinotenda mumaonero ekuzvininipisa, kuti gnu Linux yanga isingamisike mhinduro dzese pane kumhanya kunoshamisa kwekuti zuva rega rega uye kana ukaregeredza uchirasikirwa nezvinhu zvikuru, ini ndinoshanda munzvimbo yekufona uye masisitimu, ASTERISK nguva dzese zvinondishamisa, centos al risingaperi uye kupfuura, uye kana Asterisk isingashande kofi imhaka yekuti haina kubatana nechiteshi cheEthernet, saka AGI neAMI rukudzo rwangu.
Zentyal, clearos, nezvimwe. uye nekudaro matoyi akati wandei akagadzirwa nevakagadziri vakuru vanokodzera kubvisa yavo tsvuku vaive neheti. HAHA HAHA zvakanaka raive jee, kwete kwete chokwadi, nekutenda kune vese vatori vechikamu vanopa nguva yavo MWARI ivo vachagovana ruzivo rwakawanda rwechokwadi.
A uye munhu ari Windows fan ndakaverenga kuti ndataura chimwe chinhu nezveCRM, nekuti ini ndaisa CRM uye ese ari maLinux mienzaniso yevakawanda OPEN ERP vane CRM, vtiger vane CRM, shuga CRM, nyangwe nzvimbo dzekutengesa. , nezvimwe. Zvakanaka ini ndinofunga kuti munhu wese anodanana nemusikana wake, kunyangwe hazvo uyu akashata achitaridzika kunge muchindakadzi, zvakanaka RARAMA KURARAMA KUNA MAMBO. Penguin Mune yakanaka nguva
Anodiwa LINUXERO, ini ndoda kudzokera kuLinux uye mubvunzo wangu wakanangana nekunzwisisa kuti iyo 32 kana 64 bit Ubuntu distros ine zvigadzirwa zvakafanana uye zvinoshandiswa mune imwe kana imwe sezvazvinoitika nema windows kana mune ese ari maviri mamiriro vane zvakafanana? Ndatenda nemhinduro.
Joseph Abraham Cruz akadaro
Kutenda nemupiro, zvakandipa tarisiro yakanaka kwazvo yekuti ungatanga sei munzira ino refu, kwaziso.
Pindura kuna Jose Abraham Cruz